Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Basic Anatomy အခြေခံ (အနာတော်မီ) ခန္ဓာဗေဒ
ခန္ဓဗေဒ စနစ် (၁ဝ) မျိုး 1. Skeletal (စကယ်လတန်) အရိုးစနစ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် သက်ရှိသတ္တဝါများအနက် အရှုတ်ထွေးဆုံးဖြစ်ပြီး။ Microscope အနုကြည့် မှန်ဘီလူးဖြင့်သာ မြင်ရသည့် သေးငယ်လွန်းသော အစိတ်အပိုင်း Cells (ဆဲလ်) သန်းထောင်ပေါင်း များစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
• Cells (ဆဲလ်) ကလပ်စည်းဆိုသည်မှာ သက်ရှိတို့၏ အသေးငယ်ဆုံးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
• Tissues တစ်ရှူး = တူညီသည့် (ဆဲလ်)များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဥပမာ Epithelial Tissue (အပီသီလီရယ်) အပေါ်ယံလွှာ၊ Connective Tissue (ကွန်နက်တစ်) တွယ်ဆက်၊ Muscle Tissue (မာဆယ်) ကြွက်သား၊ Nervous Tissue (နားဘတ်စ်) အာရုံကြော။ • Organs အင်္ဂါ = မတူညီသော (တစ်ရှူး) များစွာတို့ ပါဝင်ပြီး၊ အလုပ်တမျိုးကို ဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဥပမာ အစာအိမ်တွင် ကြွက်သား + အာရုံကြော + အပေါ်လွှာ + အတွင်းလွှာတို့ ပေါင်းစပ် ပါဝင်နေကြသည်။
• Systems စနစ် = သက်ရှိတို့၏ ရှုတ်ထွေးသည့် အမျိုးမျိုးသော အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ (ဆဲလ်) တည်ဆောက်ထားပုံ
(ဆဲလ်) တခုတည်းရှိသော ဝမ်းကိုက်ရောဂါ ဖြစ်စေသည့် Amoeba (အမီးဘား)၊ RBC သွေးနီဥ၊ (ဆဲလ်) တခုတည်းရှိသော ဝမ်းပျက်၊ ဆီးအောင့်၊ ဦးနှောက်ရောင် ဖြစ်စေတတ်သည့် E. coli ဗက်တီးရီးယား၊
(ဆဲလ်) တွင် Cell wall နံရံ၊ Nucleus (နယူကလီးယပ်စ်) နှင့် Cytoplasm (ဆိုက်တိုပလာဆမ်) တို့ ပါဝင်သည်။ နံရံသည် အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ကို ကန့်ထားကာ (ဆဲလ်) ၏ ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဖြစ်စေသည်။ ဓါတ်ပစ္စည်များ အထဲဝင်-အပြင်ထွက်နိုင် စေရန်လည်း လုပ်ပေးသည်။ (ဆိုက်တိုပလာဆမ်) သည် (ဂျဲလ်) ကဲ့သို့ ကျိချွဲချွဲဖြစ်သည်။ ၎င်းထဲ၌ သေးငယ်သည့် ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းထဲရှိ Nucleus (နယူကလီယပ်စ်) ခေါ် (ဆဲလ်) ၏ အထိန်းပင်မထဲတွင် DNA ခေါ် မျိုးဗီဇ ပါဝင်သည်။ ၎င်းထဲရှိ Nucleous (နယူကလီ ယိုးလပ်စ်) ၌ (ပရိုတိန်း) ဖြစ်ရေးတွင် ပါဝင်ရသည့် RNA ရှိသည်။ ၎င်းမှာ (ဆဲလ်) ကြီးထွားစေရန်၊ ပျက်သည်ကို ပြင်ရန်၊ သေသည်ကို အစားထိုးရန်တို့အတွက် (ဆဲလ်) ပွားခြင်း ဖြစ်ရသည်။ (ဆဲလ်) တခုတည်းရှိသော ဝမ်းကိုက်ရောဂါ ဖြစ်စေသည့် Amoeba (အမီးဘား)၊ RBC သွေးနီဥ၊ WBC သွေးဖြူဥအမျိုးမျိုး၊ ဝမ်းပျက်၊ ဆီးအောင့်၊ ဦးနှောက်ရောင် ဖြစ်စေတတ်သည့် E. coli ဗက်တီးရီးယား၊ (အေရီယိုလာ)၊ (အဒီပို့စ်)၊ (ဖိုက်ဘရပ်စ်)၊ တွယ်ဆက်တစ်ရှူးများ
4. Nervous Tissue (နားဘတ်စ်-တစ်ရှူး) အာရုံကြော၊ ၁။ Epithelial Tissue (အပီသီလီရယ်-တစ်ရှူး) အပေါ်ယံလွှာ
တကိုယ်လုံးအနှံ့ရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာပြင်၊ ဝမ်းတွင်းခေါင်းများ၊ အခေါင်းရှိသည့် အင်္ဂါများ၊ (ဂလင်း) များ အားလုံးကို ဖုံးနေသည့် အလွှာဖြစ်သည်။ ၎င်းက ကာကွယ်မှုပေးခြင်း၊ အရည်များညှစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ စုပ်ယူပေးခြင်း၊ စွန့်ထုတ်ပေးခြင်း၊ တဖက်မှ တဖက်ဆီသို့ ပြန့်နှံ့စေခြင်း၊ အာရုံခံပေးခြင်းများ လုပ်ပေးသည်။ (အပီသီလီရယ်-တစ်ရှူး) ၏ (ဆဲလ်) များသည် တခုနှင့်တခု ထိစပ်နေကြပြီး၊ တဖက်က အပြင်သို့ မျက်နှာမူနေကာ၊ (ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်) နှင့် (ပရိုတင်း) တို့ ပါဝင်သည်။ (အပီသီလီရယ်-တစ်ရှူး) သည် တထပ်တည်း သို့မဟုတ် အထပ်များစွာရှိသည်။ အပြား = အရေပြား၊ ကုဗပုံ = (ဂလင်း-တစ်ရှူး၊ ကျောက်ကပ်၊ ကော်လံပုံ = အစာခြေလမ်း၊ အသက်ရှူလမ်း - Epithelial Membranes (အပီသီလီရယ်-မင်ဘရိန်း) ခေါ် အပေါ်ဖုံးအလွှာ သည် ကိုယ်ထည်၊ ကိုယ်တွင်းခေါင်းများ၏ အတွင်းပိုင်း၊ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကို ဖုံးလွှမ်းထားသည့် (တစ်ရှူး) ဖြစ်သည်။ - Mucous Membranes (မြူးကပ်စ်-မင်ဘရိန်း) = (မြူကိုဆာ) = အစာခြေလမ်း တလျှောက်လုံးအား အတွင်းက ဖုံးထားသည်။ အပြင်သို့ မျက်နှာမူထားသည့် အခေါင်းပါ အင်္ဂါများအားလည်း အတွင်းက ဖုံး ထားသည်။ မွေးလမ်း၊ အသက်ရှူလမ်း၊ ဆီးလမ်းများအားလည်း အတွင်းက ဖုံးထားသည်။ - Serous Membranes (ဆီးရပ်စ်-မင်ဘရိန်း) = (ဆီရိုဆာ) အပြင်သို့ မျက်နှာမူမထားသည့် အခေါင်းပါ အင်္ဂါများအား ဖုံးထားသည်။ ၎င်းမှ အရည်များ စစ်ထုတ်သည်။ ၎င်းအရည်သည် မျက်နှာပြင်များအကြား ချောမွေ့စေရန်ဖြစ်သည်။ အဆုပ်ကို ဖုံးထားသော (ပလူရာ)၊ နှလုံးအား (ပယ်ရီကားဒီယမ်)၊ ဦးနှောက် အား (မင်နင်းဂျီးစ်)၊ ဝမ်းဗိုက်ထဲရှိ အင်္ဂါများအား (ပယ်ရီတိုနီယမ်) စသည်တို့ဖြင့် ဖုံးထားသည်။ အားလုံး တို့သည် နှစ်လွှာစီရှိပြီး၊ အတွင်း၌ ဝါကျင့်ကျင့် အရည်ရှိသည်။ ၎င်းကြောင့် ပွတ်တိုက်မှုကို သက်သာ စေသည်။) - Connective Tissue Membranes (ကွန်နက်တစ်-တစ်ရှူး) အလွှာ = အဆစ်များ၏ အတွင်းပိုင်း ဖုံးထားသည့် (ဆိုင်နိုဗီရယ်-မင်ဘရိန်း)၊ ဦးနှောက်နှင့် ခါးရိုးထဲရှိ အာရုံကြောများအား ဖုံးထားသည့် (မင်နင်ဂျီးစ်) တို့ဖြစ်သည်။
(ဆဲလ်) များကို ဆက်စပ်တွယ်ကပ်နေစေသည့် (တစ်ရှူး) ဖြစ်သည်။ ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဖြစ်စေသည်။ အဆီကို သိုလှောင် ထားသည်။ ရောဂါအချို့ကို အကာကွယ်ပေးသည်။ ပျက်စီးသည်များကို ပြင်ရန်ကူညီသည်။ အမျိုးအစား များစွာ ရှိသည်။ 1. (အေရီယိုလာ) တွယ်ဆက်တစ်ရှူး၊ 2. (အဒီပို့စ်) တွယ်ဆက်တစ်ရှူး၊ 3. (ဖိုက်ဘရပ်စ်) တွယ်ဆက်တစ်ရှူး၊
သွေးအား မှန်ပြားပေါ်တင်ကာ အရောင်ဆိုးထားသည့်ပုံ
1. RBC = Red blood cell = Erythrocyte သွေးနီဥ၊ 2. WBC = White blood cells = Leukocytes (လူကိုဆိုက်) သွေးဖြူဥများနှင့် 3. Platelets (Thrombocytes) (ပလိပ်လက်) ခေါ် သွေးမှုံတို့ ပါဝင်သည်။
RBC သွေးနီဥ သည် အများဆုံးဖြစ်သည်။ RBC သည် ပျမ်းမျှ ရက် ၁၂ဝ အသက်ရှင်သည်။ လူ့ကိုယ်ထဲမှာ RBC ပေါင်း ၂့၅ ထွီလီယန် ရှိသည်။ စက္ကန့်တိုင်းမှာ RBC အသစ်ပေါင်း ၂့၅ သန်း ထုတ်ပေးနေသည်။ သွေးသည် မိုင် ၆ဝ,ဝဝဝ ခရီး သွားနေခြင်း ဖြစ်သည်။ RBC တခုသည် ကိုယ်ခန္ဓာထဲ လှည့်လည်ရန် ၂ဝ စက္ကန့်ပင် မကြာချေ။ WBC သွေးဖြူဥ များထဲတွင် Neutrophil နူထိုဖီးလ်၊ Eosinophil အီယိုဆင်နိုဖီးလ်၊ Basophil ဘေဆိုဖီးလ်၊ Lumphocyte လင်ဖိုဆိုက်၊ Monocyte မိုနိုဆိုက်၊ Macrophage မက်ကရိုဖေ့ခ်ျ၊ တို့ပါဝင်သည်။ Platelets (ပလိပ်လက်) အရေအတွက်သည် အချို့ ရောဂါများ Aplastic anemia, Bone marrow cancer, DHF (သွေးလွန်တုပ်ကွေး) တို့တွင် နည်းသည်။ Thrombocyto-penia ဟု ခေါ်သည်။ Plasma (ပလာစမာ) သွေး၏ အရည်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သွေး၏ ၅၅% ရှိသည်။ အရေးပါသော (ပရိုတိန်း) များပါနေသည်။ ၎င်းထဲတွင် အသဲမှထုတ်ပေးသည့် Fibrinogen (ဖိုင်ဘရင်နိုဂျင်) ခေါ် သွေးအားခဲစေသည့် ပစ္စည်းပါသည်။ (ပလာစမာ) မှ သွေးခဲစေသည့် ပစ္စည်းများ ထုတ်လိုက်ပါက Serum (စီရမ်) ကျန်ရစ်သည်။ အချို့ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများမှာ (စီရမ်) မှ ထုတ်ယူရသည်။ WBC သွေးဖြူဥအမျိုးမျိုး၊ % မည်မျှရှိသည်၊ လုပ်သည့်အလုပ်။ - နူထိုဖီးလ်၊ ၆၅%၊ (ဗက်တီးရီးယား)များအား တိုက်ဖျက်ပေးသည်။ Pus ပြည်ထဲ၌ပါဝင်။
- အီယိုဆင်နိုဖီးလ်၊ ၄%၊ Parasite (ပါရာဆိုက်) ခေါ် ကပ်ပါးကောင်များအား တိုက်ဖျက်ပေး။
- ဘေဆိုဖီးလ်၊ ၁%၊ Allergy (အလာဂျီ)ဖြစ်လျင် Histamine (ဟစ်စတမင်း)ထုတ်ပေးသည်။ - လင်ဖိုဆိုက်၊ ၂၅%၊ B cells (အင်တီဘော်ဒီ) Antibody ထုတ်ပေးသည်။ T cells ခုခံအားကိစ္စတွင် ပါဝင်။ AIDS ဖြစ်လျင် ၎င်းနည်းသွား။ - မိုနိုဆိုက်၊ ၆%၊ လေစုပ်စက်ကဲ့သို့ ရှင်းပေးသည်။ မက်ကရိုဖေ့ခ်ျ၊ ခုခံအားအတွက် ကူညီသည်။ (၂) Cartilage (ကားတလေ့ခ်ျ) အရိုးနု Rib နံရိုး။ Ear နားရွက်၊ Nose နှာခေါင်း၊ Throat လည်ချောင်း၊ Intervertebral disks ခါးရိုးဆစ်ကြား အရွတ်တို့သည် အရိုးနုများဖြစ်ကြသည်။ ၃။ Muscle Tissue ကြွက်သားတစ်ရှူး၊ ရှုံ့နိုင်၊ ဆန့်နိုင်စွမ်း ရှိသည့် (ဆဲလ်)များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ (ဆဲလ်) များစွာနှင့် သွေးများစွာရှိသည်။ (ဆဲလ်) များသည် ရှည်လျှားပြီး၊ အထပ်ထပ် သို့မဟုတ် အဆုပ်လိုက်တည်ဆောက်ထားသည်။ ကြွက်သားတစ်ရှူး သုံးမျိုးရှိသည်။ 1. (စကယ်လ်တယ်-မာဆယ်) အရိုးကြွက်သား = ဆလင်ဒါ ပုံရှိသည်။ (နူကလီယပ်စ်) တခုမက ရှိသည်။ ကန့်လန့်စင်း ရှိသည်။ စိတ်ကနေ ထိန်းပေးနိုင်သည်။ အရိုးများတွင် တွယ်ကပ်နေသော ကြွက်သားများဖြစ်သည်။ 2. Smooth muscle (စမုသ်-မာဆယ်) အနုစားကြွက်သား = ရက်ကန်းလွန်းပုံရှိသည်။ (နူကလီယပ်စ်) တခုတည်း ရှိသည်။ ကန့်လန့်စင်း မရှိ။ စိတ်က မထိန်းနိုင်။ အစာအိမ်၊ အူ၊ သားအိမ်၊ သွေးကြောတို့ရှိ ကြွက်သားများ ဖြစ်ကြ သည်။ 3. Cardiac muscle (ကားဒီယက်-မာဆယ်) နှလုံးကြွက်သား = ဖြာထွက်နေသည့် Fibre (ဖိုင်ဗာ) များရှိသည်။ (နူကလီယပ်စ်) တခုတည်းရှိသည်။ ကန့်လန့်စင်း ရှိသည်။ စိတ်ကနေ မထိန်းနိုင်။ ၄။ Nervous Tissue (အာရုံကြော) တစ်ရှူး ဦးနှောက်၊ ခါးရိုးထဲက (နာ့ဖ်) အာရုံကြောများတွင်ရှိသည်။ ကြွက်သားများအား ကြုံ့စေရန်၎င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အား သိနေ စေရန်၎င်း လုပ်ပေး၍၊ ခန္ဓာကိုယ်၏ လုပ်ငန်းများအကြား ထိန်းညှိပေးသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ဆင်ခြင်တုံတရား၊ မှတ်ဥာဏ် တို့တွင် အဓိကကြသည်။ ထိုအလုပ်များလုပ်နိုင်ရန် လျှပ်စစ်ဓါတ်ဖြင့် ဆက်သွယ်သည်။ Body Cavities ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အခေါင်း (လှိုင်ခေါင်း) များ 1. Thoracic cavity (သိုရက်ဆစ်-ကယ်ဗတီ) ခေါ် ရင်ခေါင်းပိုင်းအခေါင်းထဲတွင် Heart နှလုံး၊ Lungs အဆုပ်များ၊ Trachea လေပြွန်ကြီး၊ Esophagus (အီဆိုဖေးဂတ်စ်) အစာမြိုပြွန်၊ Blood vessels (ဘလတ်-ဗက်ဆယ်လ်စ်) သွေးကြောများ၊ Nerves အာရုံကြောများရှိကြသည်။ ၎င်းတို့အား ဘေးတွင် Ribs နံရိုးများနှင့် အဆုပ်အား ဖုံးထား သည့် Pleura (ပလူရာ) တို့က ရံထားပြီး၊ အောက်တွင် Diaphragm (ဒိုင်ယာဖရမ်)ခေါ် ရင်ခေါင်းနှင့် ဝမ်းဗိုက်ကို ပိုင်းခြားထားသော ကြွက်သားကြီးတို့ ရှိကြသည်။ 2. Abdominal and pelvic cavity ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းနှင့် တင်ပဆုံရိုးတွင်း အခေါင်းများ၊ a. Abdominal cavity ဝမ်းဗိုက်ခေါင်းထဲတွင် အစာခြေလမ်းကြောင်း၏ အများဆုံးအပိုင်းအပြင် Kidneys ကျောက်ကပ်၊ Adrenal glands (အဒြီနယ်လ်-ဂလင်း) တို့ရှိကြသည်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းနှင့် အထက်က ရင်ခေါင်းပိုင်းအား Diaphragm (ဒိုင်ယာဖရမ်) ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။ b. Pelvic cavity တင်ပဆုံရိုးအခေါင်းထဲတွင် ဆီးလမ်းနှင့် မျိုးပွားအင်္ဂါများနှင့် အစာဟောင်းအိမ်ရှိသည်။ 3. ဦးနှောက်ရှိသော ဦးခေါင်းရိုးခွံနှင့် ခါးရိုးထဲရှိသော အာရုံကြောမကြီးတို့ပါသော အခေါင်းများဖြစ်သည်။ Body Cavities ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အခေါင်း (လှိုင်ခေါင်း) များ - ကျောရိုးမကြီးထဲရှိအခေါင်း တင်ပဆုံရိုးတွင်းအခေါင်း - ဦးခေါင်းပိုင်းအခေါင်း - ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိအခေါင်းများ - ရင်ခေါင်းပိုင်းအခေါင်း - ခန္ဓာကိုယ်ရှေ့ပိုင်းရှိအခေါင်း - ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းအခေါင်း - ဝမ်းဗိုက်နှင့် တင်ပဆုံရိုးတွင်းအခေါင်း (1) Skeletal System (စကယ်လတယ်-ဆစ်စတမ်) အရိုးစနစ် လူကြီးတယောက်တွင် ၂ဝ၆ ရိုးရှိသည်။ ကလေးအရွယ်၌ အရိုး ၃၅ဝ ရှိခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများတွင်လည်း အရိုး ၂ဝ၆ ရိုး ရှိသော်လည်း အရွယ်အစားငယ်ကြသည်။ လူသည် ကျောရိုးရှိသတ္တဝါဖြစ်၍ Bone (ဘုန်း) အရိုး၊ Cartilage (ကားတလေ့ရှ်) အရိုးနု၊ Ligament (လစ်ဂမင့်) အရွတ်၊ Tendon (တန်ဒွန်) အချောင်းလိုက်ရှိသော အရွတ်တို့ ပါရှိသည်။ လူ့အလေးချိန်၏ ၂ဝ% သည် အရိုးစနစ်က ဖြစ်သည်။ ပြော့သည့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ဦးနှောက်၊ နှလုံး၊ အဆုပ်တို့အား ကာကွယ်မှု ပေးထားသည်။ ကြွက်သားစနစ် နှင့် တွဲဖက်၍ လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ကယ်လ်စီယန်ဓါတ်သည် အရိုးထဲတွင် အခြားအင်္ဂါများထက်ပို၍ ပါဝင်နေသည်။ အရိုး(ဆဲလ်)အသစ်များသည် Bone marrow (ဘုန်း-မဲရိုး)ရိုးတွင်းခြင်ဆီကဖြစ်လာသည်။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ RBC သွေးနီဥ၊ WBC သွေးဖြူဥ၊ Platelets သွေးမှုံများကိုလည်း ဖြစ်လာစေသည်။ ဒေါင်လိုက်ရိုးများ ၈ဝ နှင့် ဆက်တွဲ အရိုး ၁၂၆ ရိုး တို့ဟူ၍ ၂ ပိုင်း ခွဲထားသည်။ ဒေါင်လိုက်ရိုး ၈ဝ ဦးခေါင်းခွံရိုး (၂၈)။ Cranial Bones ဦးနှောက်အားဖုံးထားသည့်အရိုးများ - Parietal (2) ပရိုင်ရတယ်၊ ခေါင်းဘေးရိုး (၂) - Temporal (2) တန်ပိုရယ်၊ နားထင်ရိုး (၂) - Frontal (1) ဖရန်တယ်၊ နဖူးရိုး (၁) - Occipital (1) အောက်စီပီတယ်၊ နောက်စေ့ရိုး (၁) - Ethmoid (1) အက်သမွိုက်၊ မျက်လုံးအတွင်းရိုး (၁) - Sphenoid (1) စဖီနွိုက်၊ နားထင်နှင့် မျက်လုံးကြားရိုး (၁) Auditory Ossicles နားနှင့်ပတ်သက်သည့်အရိုးများ၊ - Malleus (2) မဲလီယပ်စ် (၂) - Incus (2) အင်းနပ်စ် (၂) - Stapes (2) စတေးပိစ် (၂) - Hyoid (1) ဟိုင်းဝိုက် (၁) Vertebral Column ခါးရိုးမကြီး - Cervical vertebrae (7) ဆဗိုက်ကယ်၊ လည်ပင်းရိုး (၇) - Thoracic vertebrae (12) သိုရက်ဆစ်၊ ရင်ခေါင်းရိုး (၁၂) - Lumbar vertebrae (5) လမ်ဘား၊ ခါးရိုး (၅) - Sacrum (1) ဆေခရမ်၊ တင်ပါးရိုး (၁) - Coccyx (1) ကောက်ဆစ်၊ အမြီးပိုင်းရိုး (၁) (ဗာတီဘရယ်-ကော်လံ) အကောက်လေးခုရှိသည်။ ၁။ (ဆာဗိုက်ကယ်-ကာ့ဖ်) (လည်ပင်းပိုင်းအကောက်) ၂။ (သိုရက်ဆစ် ကာ့ဖ်) (ရင်ခေါင်းပိုင်းအကောက်) ၃။ (လမ်းဘား-ကာ့ဖ်) (ခါးပိုင်းအကောက်) ၄။ (ဆေခရယ်-ကာ့ဖ်) (တင်ပိုင်းအကောက်) Thoracic Cage ရင်ခေါင်းအုံ - Sternum (1) စတာနမ်၊ ရင်ညွန့်ရိုး (၁) (နှစ်ပိုင်းရှိသည်။) - Ribs = နံရိုးများ ၁၂ စုံရှိသည်။ နံရိုးအောက်ဆုံး ၂ စုံမှလွဲပြီး အားလုံးသည် ရင်ညွန့်ရိုးအား လာဆက်နေကြသည်။ Pectoral girdles (ပက်တိုရယ်-ဂါဒယ်) လက်အုံပိုင်း - Clavicle (2) ကလက်ဗီကယ်၊ ညှပ်ရိုး(၂) - Scapula (2) စကက်ပြူလာ၊ (တောင်ပံ)၊ လက်ပြင်ရိုး (၂) လက်အရိုးများ - Humerus (2) ဟူးမားရပ်စ်၊ လက်မောင်းရိုး (၂) - Radius (2) ရေဒီယပ်စ်၊ လက်ဖျံအပြင်ရိုး (၂) - Ulna (2) အာလ်နာ၊ လက်ဖျံအတွင်းရိုး (၂) - Carpals (16) ကာပယ်လ်၊ လက်ကောက်ဝတ်ရိုး (၁၆) - Metacarpals (10) မက်တာကာပယ်လ်၊ လက်ဝါးအတွင်းရိုး (၁ဝ) - Phalanges (28) ဖဲလင့်ဂျက်စ်၊ လက်ချောင်းအရိုး (၂၈) လက်ဝါး၏အတွင်း အပေါ်ယံပိုင်းနှင့် အတွင်းပိုင်းရှိ Muscle ကြွက်သားများ၊ Tendon (တန်ဒွန်) ခေါ် အရွတ်ချောင်းများ၊ Nerves အာရုံကြောများ၊ Arteries သွေးလွှတ်ကြောများ၊ Veins သွေးပြန်ကြောများ၊ Fascia (ဖါရှာ) ခေါ် အရွတ်ပြားများ။
လက်ဝါး၏အတွင်း အပေါ်ယံပိုင်းနှင့် အတွင်းပိုင်းရှိ Muscle ကြွက်သားများ၊ Tendon (တန်ဒွန်) ခေါ် အရွတ်ချောင်းများ၊ Nerves အာရုံကြောများ၊ Arteries သွေးလွှတ်ကြောများ၊ Veins သွေးပြန်ကြောများ၊ Fascia (ဖါရှာ) ခေါ် အရွတ်ပြားများ။ Lower Extremity ခြေထောက်ပိုင်းအရိုးများ - Femur (2) ပေါင်ရိုး (၂) - Tibia (2) ခြေသလုံးအတွင်းရိုး (၂) - Fibula (2) ခြေသလုံးအပြင်ရိုး (၂) - Patella (2) ဂုံညင်းရိုး (၂) - Tarsals (14) ခြေခြင်းဝတ်ရိုး (၁၄) - Metatarsals (10) ခြေဖဝါးရိုး (၁ဝ) - Phalanges (28) ခြေချောင်းကလေးများ (၂၈) Pelvic Girdle (ပဲလဗစ်ဂါဒယ်) တင်ပဆုံရိုးကွင်း - Ilium (အီလီယန်) တင်ပဆုံနောက်နှင့် အပေါ်ပိုင်းရိုး၊ - Iliac crest (အီလီယက်-ခရက်စ်) ခါးဘေးဘက် နှင့် ပေါင်ထိပ်ရိုး၊ - Ischium (အစ်စချီယန်) ဆီးစပ်ဘေးရိုး၊ - Asetabulum (အဆက်တဗျူလမ်) ပေါင်ရိုးကဆက်သည့်နေရာရှိ အရိုး၊ - Pubis (ပြူးဗစ်) ဆီးစပ်ရိုး၊ (2) Muscular System ကြွက်သားစနစ် ကြွက်သားအုပ်စုပေါင်း (၆ဝဝ)ကျော်ရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ ၄ဝ% ရှိသည်။ အမျိုးအစားများ၊ ၃ မျိုးရှိသည်။ (၁) Skeletal Muscle (စကယ်လ်တယ်-မာဆယ်) ခေါ် (စထွိုင်ရိတ်တက်) ကြွက်သား။ အရိုးအားတွယ်ထား သည်။ အရိုးလှုပ်ရှားစေရန်လုပ်သည်။ ဦးနှောက်၊ အာရုံကြောများမှ ထိန်းပေးသည်။ ကန့်လန့်စင်းများ ရှိသည်။ စိတ်ကနေ ထိန်းနိုင်သည်။ (၂) Smooth Muscle (စမုသ်-မာဆယ်) အချောစားကြွက်သား။ အတွင်းပိုင်း အင်္ဂါများ၏ နံရံများကို ဖုံးထားသည်။ ဥပမာ သွေးကြောများ၊ အစာခြေလမ်းကြောင